सबैले पागल भनेका प्रकाशराज पाण्डेले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेपछी……….( भिडियो) – Gokarneshwor Online News
सबैले पागल भनेका प्रकाशराज पाण्डेले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेपछी……….( भिडियो)
प्रकाशित मिति: १२ जेष्ठ २०७५, शनिबार १६:०७ सम्पादक: admin
सुदर्शन बजगाई,काठमाडौं |त आँट म पुर्‍याउछु यो नेपालमा बुढापाखाले युवा पुस्तालाई प्रेरित गर्न भन्ने भनाई हो । यो भनाई रामेछाप जन्मथलो भई ललितपुरलाई कर्मथलो बनाउने स्काउटर प्रकशराज पाण्डेको जिवनमा चरितार्थ भएको छ । सुरुमा रसुवामा रहेको उर्केमा हिमालको सफल आरोहण गरेका पाण्डेले आफ्नो साथीभाईलाई भने मेरो अबको गन्तव्य सगरमाथा हो । उनले त्यसो भन्दा साथीभाईले पाण्डे बौलायो भनेर गिज्जाएको उनले बताए । मनमा आँट र सफलता हासिल गरेरै छाड्ने अठोट बोकेका पाण्डेले जेठ २ गते सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर उनलाई बौलाहा भन्नेलाई मात मात्र दिएनन लाखौं युवालाई प्रेरणा बन्ने कथा संगालेर फर्किए । हेर्नुस उनका आरोहणमा तिनै साहासिक प्रकाशराज पाण्डेले प्राप्त गरेका सिकाई र अनुभव उनकै मुखबाट: